Fampidirana ny Remote Sensing | Fiaretana haran-dranomasina
Hatramin'ny taona 1970, ny fahatsapana lavitra dia nampiasaina ho fitaovana handrefesana, hahatakarana ary haminavina ny fiovan'ny tontolo iainana. Ny fahatsapana lavitra dia nanampy tamin'ny fomba vaovao amin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanomezana mizana vaovao hijerena sy hanaraha-maso ny fiovan'ny tontolo iainana. Ohatra, iray amin'ireo fampiharana azy io dia ny fampivoarana ireo maodelin'ny toetrandro amin'ny ambaratonga manerantany izay mamela ny drafitra ho an'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny alàlan'ny famantarana ireo faritra mety hiasa ho mpitsoa-ponenana hampiakatra ny mari-pana.
Ny fahatsapana lavitra sy ny fampiharana fitaovam-pandrafetana haran-dranomasina lavitra samy hafa dia ny lohahevitra amin'ny làlana an-tserasera misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahatsapana lavitra sy fanaovana sarintany lavitra momba ny fiarovana ny haran-dranomasina. Ity taranja lesona telo ity dia manampy ireo mpitantana an-dranomasina hahatakatra sy hampiasa teknolojia mahatsapa lavitra sy fanaovana sarintany - toa ny Allen Coral Atlas vaovao - hitarika sy hanatsara ny fahombiazan'ny fitantanana haran-dranomasina. Ho fanampin'ny Anglisy dia azo alaina ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEspaniola, misokatra amin'ny varavarankely vaovaofrantsay, ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBahasa Indonezia.
Ahoana ny fampiharana ny Remote Sensing amin'ny fiarovana?
Ny fahatsapana lavitra dia nampiasaina hanohanana ny fikarohana amin'ny haino aman-jery maro toy ny fanarahan-dia ny ala sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna, ny fanaraha-maso ny fiovan'ny morontsiraka, ny fanoritana ny toerana misy ny bibidia ary ny fanarahana ny mari-pana manerantany. Na izany aza, ilaina ny mahatakatra ny hevi-dehibe sy ny fomba fiasa tsy miankina amin'ny fikafika lavitra mba hisafidianana ireo angon-drakitra lavitra mahatsapa lavitra momba ny drafitra fiarovana sy ny fanapahan-kevitrao momba ny fitantanana.
Ohatra 1: Fanaraha-maso ny fihenjanana amin'ny hafanana amin'ireo haran-dranomasina amin'ny sehatra manerantany
Ny Sampan-draharaham-pirenena momba ny ranomasina sy atmosfera amerikana (NOAA) dia namolavola ny Fandaharana Watch Coral Reef mifototra amin'ny fandinihan'ny satelita ny fandrefesana isan'andro ny mari-pana ambonin'ny ranomasina (SST). 95% ny haran-dranomasina no arahi-maso isan'andro. Avy amin'ireo angon-drakitra ireo dia manome vokatra maromaro i NOAA hampahafantarana ireo mpitantana ny loza mety hateraky ny famafana, toy ny SST Anomaly, Coral Bleaching HotSpot, Degree Heating Weeks, ary Bleaching Alert Area.
Ny sarintany Bleaching Alert Area dia mampiseho ny fihenan'ny hafanana amin'ny haran-dranomasina ankehitriny. Ny angona Bleaching Alert Area dia mifototra amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny satelita. Sary © NOAA Coral Reef Watch
Ohatra 2: Sarintany ny faritra misy ny haran-dranomasina amin'ny 3D mba hanombanana ny biomassa sy ny zava-boary
Sarin'ny firafitry ny haran-dranomasina na ranomasina 3D. Sary © Simon J. Pittman
Nampiasa fitaovana finday lavitra ny Stanford Center for Ocean Solutions mba haminavina tsara kokoa ny faritra misy biomassa sy biodiversité avo lenta. Ny teknolojia antsoina hoe detection light and ranging (LiDAR) dia mampiasa hazavana amin'ny endriny laser pulsed handrefesana ny halaviran-dàlana. Io dia namela azy ireo hamorona maodely 3D, hamelona ny fahasarotan'ny ranomasina haran-dranomasina. Nampifangaroin'izy ireo tamin'ny modely zanabolana misy ny haran-dranomasina ireo maodely ireo mba hahalalana ireo faritra misy ny vatohara saro-bahana, sy ny isan'ny mponina miaina ao anatiny.
Loharano: Wedding, LM, et al. 2019. Ny fahatsapana lavitra ny firafitry ny haran-dranomasina telo-lafiny dia manatsara ny famolavolana modely ny fivondronan'ny trondro. Fihetseham-po lavitra amin'ny haiaina sy tontolo iainana 5: 150-159.